China Ọdụdọ igbe na ịkpụzi Manufacturer na Supplier | Meste
Die casting ebu
Automobile plastic akụkụ
Ugboro abụọ ogwu-ịkpụzi-akụkụ
Plastic ụlọ plastic igbe maka eletriki
Ngwa ụlọ plastik
Igbe njikọ eletrikieji ọtụtụ ebe maka mbufe na nkesa nke ike na nkwukọrịta. Akụkụ ndị dị na igbe mkpo na mkpuchi na-abụkarị plastik na-emepụta site na ịkpụzi ọgwụ.
A na-eji igbe ntanetị eletrik eme ihe maka nnyefe na nkesa nke ike na nkwukọrịta. Akụkụ ndị dị na igbe mkpo na mkpuchi na-abụkarị plastik na-emepụta site na ịkpụzi ọgwụ. Igbe nkwụsị kwesịrị ịgbaso ụkpụrụ arụmọrụ eletriki siri ike, yabụ anyị ga-ewebata igbe nkwụsị eletriki na ịkpụzi ebe a.
Kedu igbe igbe plastik?
A na-akpọkwa igbe nkwụsị eletriki na igbe njikọ, igbe igbe, njikọta eletriki, isi ihe.
Igbe njikọ eletriki bụ njikọ njikọta ụlọ eletriki, iji kpuchido njikọta ma nye mgbochi nchekwa.
Obere ngwongwo igwe ma obu plastik nwere ike buru uzo nke uzo eletriki ma obu eriri oku nke thermoplastic-sheathed (TPS) na ulo.
Ọ bụrụ na emebere ya maka ịrị elu, a na-ejikarị ya eme ihe n'uko ụlọ, n'okpuru ala ma ọ bụ zoro ezo n'azụ oghere nnweta - ọkachasị n'ụlọ ụlọ ma ọ bụ nke azụmahịa. Appropriatedị kwesịrị ekwesị (dị ka nke egosiri n'aka ekpe) nwere ike lie na nkedo nke mgbidi (ọ bụ ezie na anaghịzi ekwe ka nzuzo na ụkpụrụ zoro ezo zoro ezo) ma ọ bụ tinye ya na kọnkenti - naanị mkpuchi na-ahụ anya.
Igbe eletriki rọba nwere mgbakwunye na mwepu ha. N'ihi na ha bụ plastik, ọ dịghị mkpa itinye eriri ala na ya. Ebe ọ bụ na ejiri ihe na - enweghị ntụpọ mee ya, ịgbanwee na ntanetị enweghị ike ịpụ ma ọ bụrụ na ha metụrụ akụkụ igbe ahụ aka.
Plastic igbe na-emekarị-na tapped ịghasa oghere maka mfe mgbakwunye nke switches na outlets. Igbe ndị a na-abata na otu ndị otu, òtù abụọ, na ọbụna nhazi ọtụtụ-otu.
Boxdị igbe nkwụsị eletrik
Boxesdị igbe igbe eletriki dị iche iche: ụdị ụlọ, ụdị mpụga, ụdị nkwụsi ike dị elu, na ụdị mmiri. Akụrụngwa na nchekwa achọrọ dị iche site na gburugburu na mba dị iche iche. Ya mere ọgwụ ogwu na ịkpụzi nhazi dịkwa iche iche.
1. igbe dị n'ime ọkụ eletrik.
Dị resin: ABS, PVC
Ọtụtụ n’ime ha bụ igbe ọrụ ụlọ ọrụ na ebe obibi. A na-eji ha maka nkesa ike dị n'ime ụlọ na njikwa etiti, yana ntinye ọkụ na ntanetị, yana ịnweta nkwukọrịta na njikwa. Igwe n'ozuzu na-arụ ọrụ dị n'okpuru 250 volts. The plastic resin a chọrọ iji soro ire ọkụ retardant ọkwa UL94 V1 ~ V0.
2. igbe igbe eletrik n'èzí.
Indị resin: ABS, ABS / PC
Achọrọ igbe dị n'èzí iji nwee ike iguzogide n'èzí dị elu na obere okpomọkụ na mmiri mmiri ozuzo na ìhè anyanwụ na-eme ka mmiri ghara ịka nká, ihe ndozi mmiri na-egbochi mmiri ọgwụ, ị na-emegide ultraviolet radiation, mee ka ọnọdụ dị elu ma dị ala. Ọ dị mkpa iji plastik dị elu, dị ka PC ma ọ bụ naịlọn, nwere ihe mgbakwunye pụrụ iche na-eguzogide ọgwụ ultraviolet na arụmọrụ okpomọkụ dị elu ma dị ala.
3. Industrial nkwụsị igbe.
Dị resin: ABS, ABS / PC, naịlọn
Igbe nkwụsị ụlọ ọrụ, na-enwekarị arụmọrụ arụmọrụ pụrụ iche, dị ka akụkụ ziri ezi na nkwụsi ike, mmanụ na nguzogide alkali, na-eyi nguzogide. Plastic ihe ga-ahọrọ dị iche iche chọrọ na ebu ziri ezi ga-ekpebisi ike.
4. igbe ọkụ eletrik dị elu na-eguzogide ya.
A na-ejikarị igbe njikọta mee ihe maka gburugburu ebe obibi dị elu, dị ka ụlọ ọrụ eletriki, igbe nchịkwa eletrik, ngwaọrụ nkesa. Achọrọ ezigbo mkpuchi na ihe ndị na-egbochi ịka nká. Naịlọn na ihe ndị ọzọ injinịa plastik na-adịkarị họrọ.
5. Isi ọrụ nke foto fotovoltaic modulu junction bụ iji jikọọ ma kpuchido modul fotovoltaic nke anyanwụ, na-eduzi nke ugbu a site na modul fotovoltaic. Dịka ihe dị mkpa nke modulu sel nke anwụ, igbe ntanetị nke fotovoltaic modul bụ ngwaahịa zuru oke nke jikọtara imepụta eletriki, imepụta igwe na ngwa ihe. Ọ na-enye ndị ọrụ usoro njikọ jikọtara ọnụ nke modul fotovoltaic modul.
6. Waterproof nkwụsị igbe.
Resdị resin: ABS, ABS / PC, PPO
E nwere ụkpụrụ abụọ maka igbochi mmiri.
A. Short mpụga ikwommiri, ntụgharị mmiri na-agaghị wụsara ozugbo na ngwaahịa.
B. Ngwaahịa na-emikpu n'ime mmiri.
Ihe ndị na-adịghị mkpa mmiri na-adabere n'ụdị akụkụ plastik, dị ka:
Zoro ezo na mgbanaka akara na nkwonkwo ma ọ bụ oghere;
Ultrasound ịgbado ọkụ nke abụọ nkwonkwo:
Ihe nkedo ndi mmadu.
Igbe mgbochi mmiri na-adịghị
N'èzí plastic nkwụsị igbe
Igbe ime ụlọ ọkụ
Igbe ịkụ ọkpọ ọkpọ plastic
Ejiri eji igbe mkpuchi plastic
Naịlọn plastic junction box
Ihe choro maka igbe igbe eletrik
Igbe nnweta eletriki nwere njikọ chiri anya na ọkụ eletrik ma ọ ga-agbaso ụkpụrụ nchekwa dị mkpa ma ọ bụ ihe achọrọ, ọkachasị:
1. Nguzogide ihu igwe: iguzogide elu na ala okpomọkụ, iru mmiri
2. Eletriki mkpuchi
3. Iguzogide oke voltaji, ọnụọgụ ọkụ na ọnụọgụ ọnụọgụ: Nwere ike ịrụ ọrụ na voltage dị elu ma ọ bụ dị ala, ọkara na elu elekere eletrik.
4. Mgbasa ọkụ: a na-eme ngwa ngwa ọkụ nke ihe ndị dị n'ime ya ga-eme ngwa ngwa.
5. Ọkụ na-ere ọkụ: Ọ naghị adị nfe ọkụ ma bute ọkụ.
6. Mgbochi radiation-ultraviolet: Mgbe igbe njikọ eletriki dị na ọkụ siri ike ma ọ bụ gburugburu ebe obibi, ọ gaghị aka nká na ọdịda n'ihi ụzarị ultraviolet.
7. Nrụgide nke corrosion: Na acid, alkali na nnu gburugburu, ọ gaghị emebi ma mebie, ọ nwere ike ịrụ ọrụ ogologo oge.
8. Sealing na waterproof: ike na-arụ ọrụ na mmiri ma ọ bụ mmiri na gburugburu ebe obibi
9. Nchebe gburugburu ebe obibi: Gbaa mbọ hụ na ihe ndị e ji mee ihe ga-ewepụta ihe na-egbu egbu ma ọ bụ anwụrụ ọkụ mgbe ọ dị ọkụ ma ọ bụ gbaa ọkụ, nke ga-emerụ ahụike mmadụ.
Atụmatụ Nkọwa nke Igbe Njikọ Ọdụdọ
1. Ihe nhọrọ: Ugbu a, isi ngwa ubi nke waterproof nkwụsị igbe ngwaahịa ndị dịtụ aka ike na saịtị na-emeghe ikuku. Mmetụta na-eguzogide, static ibu ike, mkpuchi ihe onwunwe, * na-abụghị toxicity, * merela agadi na-eguzogide, corrosion eguzogide na ire ọkụ retardancy nke ihe a ga-atụle mgbe atụle nchekwa arụmọrụ nke ngwaahịa. (Ọrụ ndị na-adịghị egbu egbu na-echegbu onwe ya, ọ bụ n'ihi na ọ bụrụ na ngwaahịa ngwaahịa na-egbochi mmiri na ọkụ ọkụ, combustion agaghị ahapụ gas na-egbu egbu ma na-emerụ ahụ, ọ na-abụkarị ọkụ n'ihi inhalation nke ọtụtụ gas na-egbu egbu na ọnwụ bụ nke ihe ka n'ọnụ ọgụgụ.
2. Structural design: A ga-echebara echiche maka ike, ịma mma, nhazi dị mfe, ntinye dị mfe na imegharị igbe igbe mgbochi mmiri. Ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa ndị na-egbochi mmiri na-emepụta mmiri nke ndị na-emepụta mba ụwa anaghị enwe akụkụ ọ bụla, nke nwere ike ime ka usoro mgbake ngwaahịa dị mfe. Otú ọ dị, ihe ndị ọtụtụ ndị na-emepụta ụlọ na-eji eme ihe dị iche, na mgbochi waxy Njirimara nke ihe ndị ahụ adịghị mma. N'ozuzu, a na-etinye ihe ntinye ọla na oghere ntinye nke igbe nkwụsị mmiri na-eme ka ike nwụnye ya, nke ga-eme ka oge na ụgwọ maka usoro mgbake ihe. Enwere ike idozi nsogbu ndị dị otú a site na ịhọrọ akụrụngwa nwere arụmọrụ dị elu nke ndị nrụpụta oge niile na-enye.
3. Wall ọkpụrụkpụ: N'ozuzu, mgbe n'ịtụle n'ozuzu na-eri nke ngwaahịa, ngwaahịa mgbidi ọkpụrụkpụ ga-belata dị ka o kwere mee na-emetụta mmetụta na-eguzogide na waxy eguzogide nke ngwaahịa. N'ihe nke igbe igbe mgbochi mmiri na-enweghị mmiri, mgbidi mgbidi nke ABS na ihe PC dị n'etiti 2.5 na 3.5 mm, iko polyester siri ike na-adịkarị n'etiti 5 na 6.5 mm, na ọkpụrụkpụ mgbidi nke ihe ọkụkụ aluminom bụ n'ozuzu n'etiti 5 na 6.5 mm. Ọ dị n’agbata 2.5 na 6. Mgbidi ọkpụrụkpụ ihe kwesiri ka emee ya iji mejuputa ihe nrụnye chọrọ nke ọtụtụ akụrụngwa na ngwa.
4. Nhọrọ akara nke akara akara: Maka ngwaahịa igbe mkpuchi, nke a na-ejikarị eme ihe bụ: PUR, EPDM, Neoprene, Silicon. Ọnọdụ okpomọkụ, nguzogide esemokwu, mgbasawanye mgbasa, ike, njupụta, mkpakọ mkpakọ na nguzogide kemịkalụ kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ mgbanaka akara.
5. Ofu Waterproof njikọ cover ịghasa ihe: Mgbe waterproof nkwụsị igbe mkpuchi na isi na-achọkwa, isi akụrụngwa bụ bolt. Nhọrọ nke ihe bolt dịkwa oke egwu. Ihe a na-ejikarị eme ihe bụ PA (naịlọn) ma ọ bụ PA alloy, a pụkwara iji ya mee ihe nchara nchara. Ekwesịrị ịtụle ịdị na-arụ ọrụ n'ihe eji arụ ọrụ n'elu. N'ihi na ndị ọrụ dị iche iche na-eji ụzọ dị iche iche wee na-egbo mkpa dị iche iche, dịka ntinye nke igwe eletriki eletriki na ntinye akwụkwọ ntuziaka, a ga-atụle ike nke ịghasa na imewe.
Ọdụdọ igbe igbe na ịkpụzi
Akụkụ ndị bụ isi nke igbe nkwụsị bụ ụlọ plastik na mkpuchi. Ejiri usoro ntanye plastik mee ha. Ngwá ọrụ ahụ bụ ọgwụ ebu.
Ọdịdị nke nkedo nkedo nkedo nkedo na-adabere na nhazi usoro na mmepụta nke igbe nkwụsị, nke na-ekpebi nhazi nhazi nke nhazi na oghere oghere.
Nchara na ekweghị ike nke ntinye na-adabere na ngwa resin plastic, ma ọ bụ ọdịdị nke ngwaahịa ahụ na ndụ ndụ nke ebu. A na-ejikarị P20 ígwè mee ihe dịka ihe ntinye ebu maka iwu ndị a na-emebu, a na-ejikwa S136 maka elu gloss elu. N'ihi na nnukwu iwu nke ngwaahịa, multi cavities ebu dị mkpa iji nwekwuo mmepụta ikike.
Junction igbe plastic injection ebu
Mestech enwetawo ahụmịhe bara ụba maka ịme ebu na ịmịpụta ọgwụ maka igbe nkwụsị maka ọtụtụ ndị ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere ọchịchọ maka akụkụ plastik na igbe nkwụsị, biko kpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Plastic akụkụ nke mmiri purifier
Osote: Plastic reels maka eriri na waya
Audio ọkà okwu plastic ụlọ
Phonelọ mkpuchi vidiyo ekwentị
Plastic akụkụ nke shadowless oriọna
Plastic akụkụ nke mmiri purifier